Waxaa Meesha ka Sii baxayo Magacii Soomaaliya Si tartiib tartiib ah. – XAMAR POST
Waxaa Meesha ka Sii baxayo Magacii Soomaaliya Si tartiib tartiib ah.
By Zakariye iiman Last updated Mar 15, 2019
Laba sano kaddib, waxaa meesha ka sii baxaya magacii Soomaaliya, si tartiib tartiib ah, Soomaalidii oo aan ogeyn. Qaramada Midoobay, ayaa magaca Soomaaliya ka masaxday ergada ay u dirto wadammada burbursan, ee ay ka howlgalaan ergooyinka gaarka ah (special representatives). Faransiiska ayaa qalqaaliyey in la magacaabo nin u dhashay Gabon, lagana dhigo ergay gaar ah.
Wixii hadda ka dambeeya, ma jiri doono ergay gooni u qaabilsanaan doona Soomaaliya, waayo ergayga la magacaabay waxaa loo huwiyey daladda Horn of Africa, si waddamadaas ay ugala shaqeeyaan arrinta Soomaaliya, qaasatan sida laga yeelayo after 2020, maadaama soddon sano aysan ka jirin dowlad dhab, oo dalka wada xukunta, taas oo qasbaysa in marka u dambeysa uu Security Council-ku qiimeeyo qarannimada Soomaaliya, maadaama markii hore ay iyagu qarannimada na siiyeen 1950).
Ergayga Gabon u dhashay, wuxuu fadhigiisa noqonayaa Itoobiya hadduu doono, laakiin shaqadiisa dhabta ah waa tan Soomaaliya. Waxaa ujeedku yahay inaysan mar dambe dhicin “ergay UN ah baa la ceyriyey”. Haddaba, milkiileyaashii iibsaday furaha Villa Somalia, sow ma sii qarribin, oo ma halligin qarankii Soomaaliya ee la soo kabkabayey illaa shirkii Carte, kaddib markii ay ceyrsheen ergaygii UN-ta?
Waxaa qoray Prof ; Maxamed Xaaji Ingiriis
Madaxweynaha Jabuuti oo kusoo jeedda Soomaaliya